Somali » Shakhsiga » Xirmooyin » Xirmooyinka Internet-ka
Adeegga ADSL Internet
Adeegga ADSL-ka shirkadda waa adeeg casri ah oo aad ku isticmaali karto internet aad u xawaara sareeya iyadoo la adeegsanayo telefoonka landline-ka ee aad gurigaaga ama ganacsigaada u isticmaasho. Wuxuu sidoo kale adeeggan ku suurtagelinaya inaad ku xirnaato internet-ka habeen iyo maalin, daawato TV-yada caalamka ama inaad soo dajisato xog muuqaal ama qoraal ah.
Faa’iidooyinka adeegga ADSL-ka Hormuud
• Xawaare wadaag (shared Bandwidth)
• Xawaare Gaar (dedicated Bandwidth)
• Internet aan kaa Go’in
• Kirada telefanka landline-ka oo bilaash ah
• Xirmooyin kala duwan oo internet ah
• Habeen iyo maalin shaqaale kuu adeega
• Laba adeegg cod iyo internet
Sida Loo codsado adeegga
• Macaamilka uma baahna telefan landline cusub haduu horay u isticmaali jiray
• Balse haduusan horay u isticmaali jirin Telefan landline mid cusub ayuu u baahan yahay
• Booqo xarunta kuugu dhaw ee shirkadda hormuud buuxi foomka codsiga 24saac gudohood ayaa lagugu xirayaa adeegga landline
Xirmooyin kala duwan Ee Adeegga ADSL Internet Xirmada xadidneeyn
Qiimaha Modem ka: $35,
Qarashka Galinta : Free
Madaxa Landline-ka: Free
Kirada : Landline-ka Free
Adeegga W-dsl Internet
Adeegga ADSL-ka shirkadda waa adeeg casri ah oo aad ku isticmaali karto internet aad u xawaara sareeya iyadoo la adeegsanayo Modemkaaga Wadsl adiga oo ku xiraya charger-ka korontdada oo kalia –kuna isticmaal gurigaaga ama ganacsigaada.sidoo kale adeeggan wuxuu kuu suurtagelinaya inaad ku xirnaato internet-ka habeen iyo maalin, daawato TV-yada caalamka ama inaad soo dajisato xog muuqaal ama qoraal ah.
Faa’iidooyinka adeegga WADSL-ka Hormuud
Xawaare wadaag (shared Bandwidth)
Xawaare Gaar (dedicated Bandwidth)
Internet aan kaa Go’in
Xirmooyin kala duwan oo internet ah
Habeen iyo maalin shaqaale kuu adeega
Booqo xarunta kuugu dhaw ee shirkadda hormuud buuxi foomka codsiga Adeegga Wadsl daqiiqado gudohoodne waad ku heleeysaa service-kaaga.
Xirmooyin kala duwan Ee adeegga W-ADSL Internet
1 MBs Shared
Qiimaha Modem: $55
NB: Modemka soo ciladooba waxaa loogu bedelayaa macmiilka mid lasoo dayactiray hadii aan la heyna waxa uu la baxayaa 50% ka mid ah Qiimaha Modem-ka iyo weliba isagoo reebaya kii soo ciladoobay.
Adeegga Wireless Internet (p2p)
Shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay bixisaa adeeg Internet wireless oo u suuragelinaya macaamiisha inay isticmaalaan internet aad u xawaarasarreeya oo ay u adeegsan karaan ganacsigooda ama shaqadooda. Adeeggan Waxaa loogu talagalay shirkadaha waaweyn sida: heyadaha, hotellada, jaamacadaha, iyo cid kasta oo baahi u qabta internet aad u xawaara sarreeya.
Xawaaraha adeegga wireless Internet
Shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay bixisaa internet leh xawaare kala duwan oo ku saleysan baahida macaamiisha. Xawaaraha ugu hooseeya ee adeegga Wireless internet-ka waa 512kb/s, kan ugu sarreeyana wuxuu gaarayaa ilaa 5MB/s, waxayna isugu jiraan xawaare gaar ah (Dedicated) iyo mid wadaag ah (shared).
Faa’iidooyinka adeegga wireless Internet
Xawaare wadaag ah (shared Bandwidth)
Xawaare Gaar ah (dedicated Bandwidth)
shaqaale heegan ah Habeen iyo maalin
Qiimayaasha Kala duwan ee wireless internet-ka
ADEEGGA MIFI INTERNET
Adeegga Hormuud Mifi shirkadda waa adeeg casri ah oo aad ku isticmaali karto internet aad u xawaara sareeya iyadoo la adeegsanayo qalab casri ah oo aad jeebkaaga ku sidan karto kuna isticmaali karto internet-kaaga goob waliba.
Faa’iidooyinka adeegga Hormuud Mifi
waa adeegg aad si fudud jeebka ugu qaadan kartid
Habeen iyo maalin adeegg joogta ah
Booqo xarunta kuugu dhaw ee shirkadda hormuud buuxi foomka codsiga Adeegga Mifi daqiiqado gudohoodne waad ku heleeysaa service-kaaga.
Xirmooyin kala duwan Ee adeegga Mifi Internet
v Qiimaha Modem (shaashad leh): $90, with ($20) = 13GB oo promotion ah.
v Qiimaha Modem (shaashad la’aan): $55, with ($20) = 13GB oo promotion ah.
Adeegga Hotspot Internet
Adeegga Hotspot waa adeeg internet aad u xawaara sareeya oo laga heli karo goobaha bulashada , hoteelada, iyo goobaha waxbarashada. Hadii aad dhex mareeyso magaalada ama aad joogto goobaha bulshada, shirkadda Hormuud waxay kuu balan qaadeysaa internet la isku haleyn karo ood ku istimcaali karo telefankaaga, kombiyutarkaaga, iyo aaladaha casriga sida Ipad-ka ama Tablet.
Faa’iidooyinka Adeegga Hotspot
ü Waa internet aad ka heli karto meel kabaxsan gurigaaga iyo goobtaada shaqo
ü Waa internet aan kaa go’in aadna u xawaara sareeya
ü Xirmooyin macquul ah kuna jaan go’an baahidaada
Qiimaha adeegga $0.00256/MBs
Xirmooyin waqtiyeeysan (Time Based)
Waxaad dooran kartaa xirmooyinka hoose hadba midka baahidaada ku saleesan
Habka isticmaal-ka (HTG-POTRAL)
• Dooro Qeeybta wireless –ka magaca HTG-POTRAL
• Magaca : Gali lambarkaaga (61*****)
• Dooro apply password
• ka dib gali 4ta lambar eek u dhex jirta fariinta kuu soo dhacday
• ka dib Dooro Sign In.
Habka isticmaal-ka (ESS1)
• Dooro Qeeybta wireless –ka magaca (ESS1)
• ka dib Dooro “SIM”
• Ka dib Dooro “connect”